Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada oo ka da?ay deegaano ka mid ah gobolka Gedo – Radio Daljir
Maarso 21, 2013 4:18 b 0
Gedo,21 March 2013,Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka da?ay deegano ka mid? ah gobolka Gedo oo in mudo ah ay ka jirtay ?abaaro baahsan .
Gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdi (Kaliil) ayaa warbaahinta ?u sheegay in roobabkani ay ?48-dii saac ee la soo dhaafay ay ka da?ayeen deegaano ka mid ah gobolka Gedo, ?isagoo intaa ku daray in roobabkani ay ku diirsadeen dadka iyo duunyaduba.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay roobabkaani da?ayeen dhawr saacadood oo xariir ah,waxaana uu intaas ku daray inay roobabkaasi ku diirsadeen dadka iyo duunyada gobolkaasi oo uu sheeegay inay mudo abbaari ka taagneyd.
Waxaa laga dareemayaa guud ahaan Soomaaliya kicinka curashada roobabka gu?ga iyadoo Cirka ay saaranyihiin daruuro waa wayn oo biyeysan,cimilada ayaa gobolada qaarkood aad u kulul gaar ahaan gobolada Gedo,Hiiraan galgaduud iyo gobolada Puntland.
23 March ayaa waxaa ay ku beegantahay maalinta dhulbaraha uu marayo Soomaaliya ?gaar ahaan degmada Luuq ee gobolka Gedo, maalitaas ayaa kulaylku waxaa uu gaaraa ?in ka badan 45 digrii oo khatar ku ah nolosha ?naflayda oo dhan.
Diiwaanka wararka Daljir????????????????????????
Caawa iyo Daljir, Khamiis, March 21, Khadar Cawl Ismaaciil ‘Daljir Buuhoodle’